Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo isagoo dhaawac ah la geeyay Godka Jilacoow. – Hornafrik Media Network
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo isagoo dhaawac ah la geeyay Godka Jilacoow.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo ay Caawa weerareen Ciidamo ka tirsan Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa isagoo dhaawac la geeyay Xabsiga Godka Jilacoow ee uu xukumo Saadaq Joon.
C/raxmaan C/shakuur ayaa isagoo dhiig baxaya Barxadda Godka Jilacoow ay Muuqaalo uga duubayaan Saadaq Joon iyo Jaamac oo amray in la weeraro Siyaasigan oo ka mid ahaa Musharixiiintii Madaxwaynanimadda Somalia.
Weerarkan oo aan loo haysan Ruqsad Maxkamadeed ayaa waxaa hogaaminayay Saadaq Joon iyo Yaasiin Ganeey, iyadoona uu horkacayay Howlgalka Sarkaal lagu magacaabo Yaasiin Ganeey.
Ma Jiro Isbitaal ay geeyeen Ciidamaddii weeraray C/raxmaan, Waxayna markii ay la baxeen isagoo dhaawac ay u gaysteen Jirdil xooggan.
Sidoo kale waxaa weerarkaasi lagu laayay dhamaan Illaaladdii C/raxmaan C/shakuur, Waxaana Maydkoodii oo daadsan goobta ay ka qaateen Ciidanka Nabadsugidda Hubki ay haysteen, iyadoona ay Isgaarsiinta Ciidanka ka amrayeen Saadaq Joon iyo Aadan Dheere in la laayo Illaaladda C/raxmaan C/shakuur.
Weerarkan ayaa imaanaya saacado kadib markii Xeer Illaaliyaha Guud ee Qaranka, Axmad Cali Daahir uu Dalbaday in Xasaanadda lagala noqdo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, Waxayna tani qayb ka tahay Qorshayaal ay Dowladda Somalia ku doonayso inay ka dhigto mid la xiro iyo mid la dilo Dadka ka fikirka duwan.
Guriga C/raxman C/shakuur oo la Weeraray iyo Isagoo Dhaawac ah oo ay qaateen Ciidanka NISA oo weeray Gurigiisa.
Faahfaahin Weerarkii lagu qaaday Caawa Guriga Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur